Xalka suuqa baarkinka casriga ah
Dhibaatada baarkinka ayaa had iyo jeer ahayd dhibaatada ugu welwelka iyo welwelka badan ee magaalooyin kala duwan. Horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyadda, albaabka kontoroolka fog ee PLC, nidaamka maareynta baarkinka maanta ayaa si tartiib tartiib ah loogu beddelay jihada caqliga. Garaadka waa hufan ...
Smart Mobility Internetka Waxyaabaha
Safarka smart ee internetka waxyaabaha 1 background Taariikhda ganacsiga iyo rajada suuqa 1. Sooyaal ganacsi Marka la fiiriyo magaalooyinka dalxiiska ee gudaha, magaalooyinka la noolaan karo, xeebta fasaxa, meelaha loo dalxiis tago, iwm, iyo sidoo kale magaalooyinka Yurub iyo Ameerika iyo gobolada kale ee ay ku badan yihiin dalxiisayaasha ajaanibta ah. , PLC ...
Nidaamka kormeerka muuqaalka baska
Xalka nidaamka kormeerka muuqaalka baska soo bandhigida Sanadihii la soo dhaafay, kormeerka muuqaalka waxaa si aad ah loo adeegsadaa munaasabado badan oo muhiim ah maxaa yeelay waxaa ku jira dareen macquul ah, ku habboon oo hodan ku ah macluumaadka, waxayna noqotay habka ugu weyn ee kormeerka amniga. Iyadoo horumarka degdega ah ee kombiyuutarka la wadaago ...
Nidaamka tareenka dheereeya ee nidaamka la socodka fiidiyowga
Maaddaama ay tahay kaabayaal muhiim ah, halbawlaha dhaqaalaha qaranka iyo habka caanka ah ee gaadiidka, tareenku wuxuu xambaarsadaa culeyska culus ee gaadiidka rakaabka iyo xamuulka, waana laf-dhabarta isku xirka gaadiidka Shiinaha ee dhameystiran, wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa qaabka ...
Nalalka dariiqa magaalada ee nidaamka la-socodka isgaarsiinta wireless-ka
Iyada oo horumarka joogtada ah ee magaalada dhijitaalka ah iyo caqliga leh, baaxadda nalalka waddooyinka magaalooyinka ayaa sii fidaya. Isla mar ahaantaana, dhibaatada maaraynta nalalka sidoo kale way sii kordheysaa. Maareynta nalalka waddooyinka magaalooyinka waa shaqo leh caasimad sare, maaddooyinka tikniyoolajiyadda sare iyo dhib weyn, ...
Xalka nidaamka codsiga nidaamka WiFi
Xalka dalabka baska ee nidaamka guddiga oo ku saleysan 4G LTE WiFi gateway Sanadkii 2015, tirada dadka isticmaala taleefannada casriga ah ee Shiinaha waxay dhaaftay 900 milyan. Marka la gaaro 2017, tirada dadka isticmaala taleefannada gacanta ayaa la filayaa inay kororto oo ay gaarto 4.55 bilyan. Iyada oo baahinta ballaaran ee terminal caqli leh ...